Xirfadlayaasha daryeelka - Cuntooyinka giraangiraha
Markaad macaamiishaada u dirto Cuntada Lugaha, waxaad dammaanad ka qaadaysaa inay heli doonaan cunnooyin diyaarsan oo caafimaad leh oo si toos ah loogu geeyo guryahooda oo ay weheliyaan baaritaanka caafimaadka iyo nabadgelyada ee mutadawiciin saaxiibtinimo leh. Diiwaangelinta macmiilkaaga cunnooyinka nafaqada leh ee dib loo eegay cunnooyinka guryaha la geeyo waa sahlan tahay waxayna macaamiishaada ka helaan cuntada nafaqada leh ee ay ugu baahan yihiin nolol caafimaad leh qiime aad u weyn. Eeg tusaalooyinka tusaalaha, menu en espanol..
Saxiix Macmiilkaaga Si Aad Cunto U Hesho!
Codso dhadhamin ama macluumaad intaa ka badan
Su'aalaha La Weydiiyo Xirfadlayaasha
Sideen u qori karaa macmiilkayga?
Diiwaangelinta macmiilkaaga siinta cuntada guriga ay u fududahay! Ku bilow inaad buuxiso tan foomka internetka ama adoo naga soo wacaya (612) 623-3363. Shaqaalaheena saaxiibtinimada leh ayaa ku farxi doona inay ku caawiyaan haddii aad hayso su'aalo dheeraad ah oo ku saabsan adeegga bixinta cuntada, shuruudaha cuntada, jadwalka bixinta iyo xulashooyinka lacag bixinta.
Sideen ku ogaan karaa in macmiilkaygu u qalmo inuu ku helo Cunnooyinka Gawaarida?
Guud ahaan, haddii qof uusan awoodin inuu si joogto ah ugu diyaariyo cunnooyin nafaqo leh nafahooda ama uusan awoodin inuu iibsado cunto caafimaad leh, waxay xaq u leeyihiin cunnooyinka guriga lagu geeyo. Cunnooyinka waxaa loo heli karaa labadaba muddo-dheer iyo ku-meel-gaar ah dadka ka soo kabanaya qalliinka ama jirada. Haddii aad su'aal ka qabto in macmiilkaagu u-qalmo iyo in kale, naga soo wac lambarka (612) 623-3363 ama noo soo dir.
Maxaa ku yimaada cuntada? Ma arki karaa liiska cuntada?
Cunto kastaa waxay ka kooban tahay qaybo caafimaad leh oo ay ka mid yihiin entree, khudrad, rooti ama hadhuudh, miro ama macmacaan iyo cabitaan. Dhammaan cuntooyinka waxaa loo diyaariyey kuwo cusub oo aan lahayn wax ka-ilaaliyayaal ah waxaana lagu sameeyaa jikooyinka maxalliga ah. Eeg a liiska tusaalaha,menu en espanol. ama codso dhadhamin.
Dib-u-fiiriyaha nafaqada cuntada
Haa! Liisaska waxaa dib u eegay dhakhtarka cuntada ee diiwaangashan si loo hubiyo inay la kulmaan gunnooyinka nafaqada ee maalinlaha ah.
Waa imisa qiimaha cuntadu? Caawinta ma loo heli karaa macmiilkayga?
Meals on Wheels waxay siisaa qiime aad u wanaagsan waxa aad hesho - cunno cusub oo diyaarsan, oo diyaar u ah in la cuno oo la keeno isla albaabkaaga. In kasta oo aan weydiisanayno tabaruc yar xagga cuntadaada, qiimuhu wuxuu ku saleysan yahay baahi. Cunnooyinka waxaa loo oggolaan karaa inay qayb ka yihiin adeegyada tanaasulka ee guriga-iyo bulshada ku saleysan iyada oo loo marayo dhaafitaanka Medicaid, iyo barnaamijyada kale ee kaabista ayaa sidoo kale kaa caawin kara daboolidda adeegga gaarsiinta cuntada. Haddii aad qabtid su'aalo ku saabsan ikhtiyaarada ikhtiyaariga ah ee macaamiishaada, naga soo wac (612) 623-3363.
Ikhtiyaarrada sonkorowga iyo kuwa kale ee cuntada gaarka u ah ma la heli karaa?
Cunnooyinka Wheels-ka ayaa si farxad leh u bixiya ikhtiyaarrada cuntada sokorta ku yar, ikhtiyaarrada soodhiyamka ku yar, iyo sidoo kale xulashooyinka khudradda. Si fudud u caddee baahiyahaaga macmiil ee baahida cuntada markii aad u qor iyaga adeega.
Ma la heli karaa cunnooyin dhaqan ahaan u gaar ah?
Cunnooyinka Kosher, Soomaali / Xalaal iyo xulashooyinka kale ee cuntooyinka gaarka ah ee xulashooyinka ah ayaa laga heli karaa meelo badan. Waad cayimi kartaa doorbidyada cuntada dhaqanka markii aad buuxi foomka gudbinta cuntada ee khadka tooska ah ama markii aad naga soo wacdo 612-623-3363.
Maxay yihiin ikhtiyaarrada bixinta? Ma la heli karaa cuntooyin barafaysan?
Marka lagu daro gaarsiinta cuntada kulul ee joogtada ah Isniinta ilaa Jimcaha inta udhaxeysa 11ka subaxnimo ilaa 1 galabnimo, waxaan sidoo kale bixinaa cunno qabow todobaadle ah. Cunto qabow oo dheeri ah ayaa la keeni karaa inta lagu jiro usbuuca si loogu isticmaalo maalmaha fasaxa ama ciidaha. Eeg tusaalooyinka tusaalaha usbuuc walba gaarsiinta.
Ma haysaa wax ilo ah oo aan la wadaagi karo macaamiishayda?
Haa! Waad awoodaa codso qoraallo in laguu soo diro. Waxaan sidoo kale haysannaa tiro kale ilaha xirfadlayaasha daryeelka la heli karo